Ihe ngosi: Gọọmentị US Ga-ebibi Azụmaahịa |ntanetị | Martech Zone
Ọnọdụ akụ na ụba na shambles na United States. Site na mmefu ndekọ, ọdịiche akụ na ụba na-arịwanye elu, ịda ogbenye na-arịgo, ọnụọgụ ụmụ amaala dabere na enweghị ọrụ, stampụ nri, nkwarụ ma ọ bụ ọdịmma dị na ọkwa ndekọ. E nwere naanị otu ngalaba nke aku na uba America na-eme nke ọma - na-akwụ ụgwọ ọrụ nke ọma, ọtụtụ oghere ọrụ, ọtụtụ itinye ego itinye ego na ahịa na-eto eto. Ngalaba ahụ bụ Ịntanetị ahụ.
Na nnukwu ndị na-ere ahịa nnukwu igbe na-ata ahụhụ yana gọọmentị na-emefu ego na ọmụmụ ihe na ọbọgwụ anụ, ọdịnihu nke ọganihu ecommerce na-ele anya dị ka Senate naanị kwadoro ụgwọ maka ụtụ isi Ahịa Internetntanetị. Ya mere,… otu akụkụ nke aku na uba na-adịghị na-ata ahụhụ ugbu a na-aga n'ikpeazụ iso ọ bụla ọzọ nke aku na uba na kemgbe nyere aka site na gọọmentị etiti.
Ọ bụrụ na agbanyeghị ụgwọ a, ọ bụ mmalite nke ngwụcha nke ọganiihu sistemụ azụmaahịa ịntanetị na-enye anyị maka afọ 20 gara aga. Big box billionaire Jeriko ndị nwere, na-achịkwa ma jikwaa ndị ịnye ọnụahịa na nkesa nke ngwaahịa na ọrụ na-now adịkwa ha adịgide na Internet… na ha na-eti eti. Ha bụ ndị na-eduga n’ịrụgide ndị ndu anyị ịtụ ụtụ na ịntanetị.
Onye ọ bụla meghere maka ịlụ ọgụ na ịntanetị
Ihere ga-eme ha. Chee echiche banyere ya… ha bụ ihe ọ bụla ma a nkesa ebe na-agbakwụnye na-efefe n'elu nke na-eri nke ngwongwo tupu anyị na-enweta ha. Obi siri m ike na ọ bụrụ na ị leghachi anya azụ n'akụkọ ihe mere eme na ndị na-ere ahịa na-eti mkpu na-ezighị ezi mgbe Katalọgụ mere ụzọ nke ndị ahịa ma ha nwere ike ịnweta ngwaahịa na ngwongwo dị ọnụ site na ozi ziri ezi ugbu a. Onye ọ bụla na-ere igbe buru ibu nwere ego na ohere iji gbanwee azụmahịa ha na .ntanetị. Ọ bụrụ na ha emeghị otú ahụ, ha kwesịrị idozi nsogbu ahụ.
Ndị ụlọ ọrụ mpaghara kwesịrị ịkwụ ụtụ isi
Inwe obodo nnukwu igbe ere ahịa agbakwunye mmefu nye ndi obodo - site na ugwo njem, onu ahia, ndi uwe ojii na ego ogwu, ya na ego… tinyere mmiri, eletriki na mkpofu. Taxestụ isi nke steeti na mpaghara na-akwụ ụgwọ ndị ahụ na mpaghara mpaghara. Ọ bụ usoro nwere ezi uche. Ọ bụrụ na m zụta ihe n'ịntanetị, ọ na-efu ndị obodo m ihe ọ bụla. Companygbọ njem na ụtụ isi mmanụ ụgbọala na-akwụ ụgwọ ụgbọ njem. Ọ dịghị mkpa maka okporo ụzọ ọkụ, ọ dịghị shoplifting njide, ọ dịghị mkpofu, ọ dịghị mkpa maka ndị ọzọ utility additional Ndozi.
Ndị na-ere ahịa anaghị ere ahịa n'ihi ụtụ isi mpaghara
Ebe ahụ na- of nwere ike ịba ụgbọala na ngwongwo, enwere m ike ịnwale uwe ahụ, enwere m ike ịwụnye akụrụngwa, enwere m ike ịnweta nkwado ngwaahịa n'aka ha, ma ọ bụ nwee ike ịgbanwe mgbanwe ahụ n'egbughị oge. Ana m azụkarị ụlọ ahịa n’obodo ahụ - mana ọ na-erughị ka m na-emebu. Ntaneti abiala n’iru. Anaghị m azụ ahịa na ntanetị maka anaghị m atụ ụtụ isi ebe ahụ… Ana m azụ ahịa n'ịntanetị n'ihi na m nwere ike isi na ekwentị m mee ya na nkeji oge. Enweghị ịnya ụgbọ ala, enweghị ebe a na-adọba ụgbọala, enweghị ichere n'ahịrị, enweghị ahịrị ndị na-adịghị agwụ agwụ nke ngwaahịa, enweghị ndị ahịa na-eme nzuzu, ma ọ bụ ndị na-akwagharị, ma ọ bụ ndị enweghị mmasị, ma ọ bụ enweghị enyemaka kpamkpam.
Emeghe Pandora Igbe nke Taxtụ Isi Obodo
Ntọala ụtụ isi depụtara 9,600 mpaghara ụtụ isi mpaghara mpaghara. Cheedị banyere saịtị ọ bụla ecommerce ugbu a, ị ga-emezi na ụtụ isi obodo 9,600 dị iche iche na-agbanwe agbanwe oge niile. Ekwesiri ka ewughachi ngwa ọ bụla eji eme ihe na 9,600 iwu ụtụ dị iche iche. Ndị na-eweta Ecommerce ga-achọ itinye ụtụ na ebe niile ha na-azụ ahịa na. Ọ bụ akụ.
Taxtụ obodo ga-egbu ndị ọchụnta ego
Kwuo maka obere azụmaahịa ọ bụla dị na weebụ nke na-enweghị ike ị nweta ụgwọ isi metụtara ụgwọ ndị a. Chọpụta… ngwọta ọhụrụ ga - agbanwe, azụmaahịa ọhụrụ na - ejikwa ụtụ isi maka gị. Ma a ga-agbakwunye ụgwọ ahụ na ngwaahịa ọ bụla ịzụrụ - na mgbakwunye na ụtụ ahịa ahịa ọhụrụ. Naanị saịtị azụmahịa ga-abụ nnukwu ụmụ nwoke nwere ike ịkwụ ụgwọ ma bido ọgbaghara a na mbu. Obere ụlọ ọrụ na ndị ọchụnta ego gbagoro.
Nke a ọ ga-eme ka egwuregwu ahụ ngosi n'etiti mgbere ahia na ecommerce? Onweghị ihe dị mma banyere ya. Akụkụ ikpeazụ nke akụ na ụba America nke na-eme nke ọma ga-esonyere ndị ọzọ na nkwụsị, enweghị ego, na ịpụ ahịa ahịa. Yana nnukwu ndị na-ere igbe dị na ụzọ ahụ.
Tags: ecommerceinternetụtụ isi ịntanetịụtụ ịntanetịụtụ isi ahịa mpaghara
Echere m na anyị kwesịrị ịmalite ịtụ ụtụ email ka ọ bụrụ "ezigbo" na ụlọ ọrụ nzipu ozi.